भीम रावलले अकस्मात दिए राजीनामा, अब माधवको एस पार्टीमा हुईकिदैंछन् ! – GALAXY
भीम रावलले अकस्मात दिए राजीनामा, अब माधवको एस पार्टीमा हुईकिदैंछन् !
५ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको संयोजकबाट उपाध्यक्ष भीम रावलले राजीनामा दिएका छन् । उनले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । रावलको राजीनामाले उनी माधव नेपालको पार्टीमा जानसक्ने संकेत गरेको छ ।
ओलीको कट्टर आलोचक मध्येमा चिनिदैं आएका रावल एमालेमै बसेपछि ओलीको चेपुवामा परेका छन् । उसो त नेकपा एमाले फेरि फुटाउने चेतावनी भीम रावलहरुले दिदै आएका थिए । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए एमाले फुट्ने ठोकुवा नै रावलहरुले गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे पार्टीमा ठूलै क्षति हुने भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमतिको औचित्य नभएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।